18.1.2019 (Friday) ည7ခွဲကျော်ကျော်မှာ ခရီးသွားအေဂျင်စီတစ်ခုနဲ့ ဂေါ်ရန်ဂျီကို ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ကားအမျိုးအစားက အန်စာတုံး၊ ကားပေါ်မှာ ကိုယ်တွေအဖွဲ့ 8ယောက်၊ tour agencyဘက်က လူ3ယောက် နဲ့ ခရီးသည် အတွဲတစ်တွဲသာ စုစုပေါင်း 13ယောက် သွားခဲ့ကြတယ်။ စနေနေ့မနက် 4နာရီဝန်းကျင်မှာ ငရုတ်ကောင်းကိုရောက်တယ်၊ ဇက်နဲ့တစ်ဖက်ကမ်းကူးဖို့ ဇက်အလာကိုစောင့်ကြရင်း မနက် 7နာရီဝန်းကျင်မှာ ကားဆီကနေ ဇက်ဆီထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။ ကမ်းစပ်ရောက်တော့ ဇက်လို့ခေါ်တဲ့ သမ္မာန်မကျ စက်လှေမကျပုံစံ (ခန့်မှန်း)အလျား10ပေခန့် အနံ4ပေခွဲလောက်သာရှိတဲ့ လှေငယ်တစ်စင်းကမ်းကပ်လာတယ်။ ကိုယ်တွေအဖွဲ့လဲ လှေပေါ်အထုပ်ကိုယ်စီနဲ့တက် နေရာယူကြပြီး တစ်ဖက်ကမ်းကို ဇက်နဲ့ကူးတာပေါ့။ လှေပေါ်မှာ ကိုယ့်အဖွဲ့ကလွဲလို့ တစ်ခြားဘယ်သူမှမပါတော့ လှေကို agencyကနေ စင်းလုံးငှားထားတယ်လို့ ထင်လိုက်သေးတယ်။
ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီတွေအသီးသီးစောင့်နေကြပြီ။ ကိုယ်တွေအဖွဲ့ 13ယောက်လဲ တစ်စီးမှာ တစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ တောင်တက်လမ်းလို အနိမ့်အမြင့်ကြမ်းတဲ့လမ်းကနေဖြတ်ပြီး တည်းမယ့် ဘန်ဂလိုဆီ ခရီးဆက်ခဲ့ကြတာပေါ့။ ဟိုရောက်တော့ အခန်းမှာခဏနား၊ မနက် 8:30မှာ ကျွန်းတွေကိုလည်ဖို့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲ ထွက်လာကြတယ် မနက်ပိုင်းမှာ လိပ်ချိုင်နဲ့ကြွေချိုင်ကိုသွား နေ့လည်ပြန်နားပြီး ညနေ 3နာရီမှာ စပါးထားခေါ် ကျောက်ခြေထောက်ကိုသွား ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြ ရေကူးကြပေါ့။အဲ့ကနေ ညနေ နေဝင်ချိန်မှာ ဂေါ်ရန်ဂျီတစ်ခုလုံးကို လှမ်းမြင်ရမယ့် အရမ်းလှတဲ့ တောင်ပေါ်က မြဝတီစေတီဆီကို တက်ခဲ့ကြတယ်။ တောင်တက်လမ်းကိုမှ လှေကားထစ်ပေါင်း 420ကျော် တက်ပြီး အမြင့်ဆုံးကနေ ရှုခင်းတွေကြည့်ရင်း ညနေ နေဝင်ချိန်အထိနေကြတယ်။ ညနေ 6နာရီကျော်မှာ တောင်အောက်ပြန်ဆင်းခဲ့ကြတယ်။ ညဘက်မှာ မီးပုံပွဲလုပ်ပြီး လရောင်ကနေပေးတဲ့အလင်းအောက်မှာ ဒီလူသားတွေ ပျော်ရွှင်နေကြတာ မနက်ပြန်ရမှာတောင်မေ့ပြီး ည 12နာရီအထိ ဂစ်တာတွေတီးသီချင်းတွေဆိုနဲ့ ပျော်ခဲ့ကြတာ
ဒီလိုနဲ့ မနက်လင်းပြီ ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ရင်း မနက်8နာရီမှာ တည်းနေတဲ့ ဘန်ဂလိုဆီကနေ လာလမ်းအတိုင်း ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီနဲ့ ဇက်ဆိပ်ဆီထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။ 8နာရီခွဲကျော်လောက်ကျ တစ်ဖက်ကမ်းကနေ ဟိုနေ့ကစီးခဲ့တဲ့ ဇက်ကူးလာတာတွေ့ရပြီး ကိုယ်တွေအဖွဲ့လဲ ဇက်ပေါ်တက်ဖို့အနားရောက်တော့ လှေဦးပိုင်းမှာ ကိုယ့်tour အဖွဲ့ကလူ 8ယောက်က ရှိနေပြီ။သူတို့နောက်မှာ ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာ လူတစ်ယောက်စီပါတာ နှစ်စီးတက်တယ် နောက် လူတစ်ချို့တက်တယ်။ ကိုယ်တို့ 4ယောက်ကျန်နေတယ် မတက်ရသေးဘူး ကြည့်လိုက်တော့ ဝန်ကအတော်များနေပြီ။ ဖြစ်ပါ့မလားတွေစိုးရိမ်ပြီး တက်ဖို့ခြေတုံချတုံဖြစ်နေပြီ လှေထိုးသားတစ်ယောက်ကပြောတယ် ” မကျန်ခဲ့ပါဘူး ပူမနေနဲ့” တဲ့ကိုယ်ပြန်ပြောလိုက်မိတဲ့စကားက “ကျန်ခဲ့မှာစိုးတာမဟုတ်ဘူး ပါသွားမှာစိုးတာ”လို့။ အဲ့ချိန်မှာ ဆင်းနေခဲ့ချင်ပေမယ့် ကိုယ့်အဖွဲ့ရဲ့ tour leaderတွေအကုန်လှေဦးမှာရောက်နေပြီ တိုင်ပင်လို့ မရဘူး ကျန်ခဲ့ပြီး လူစုကွဲမှာစိုးလို့ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး စိတ်ဖြေရင်းလိုက်ပါခဲ့ကြတယ်။ ကိုယ်တွေတက်ပြီးတဲ့အပြင်နောက်ထပ် ဆိုင်ကယ် 2စီး(တစ်စီးမှာတော့ လူနှစ်ယောက်ပါတယ်) နဲ့ ခေါင်းရွက်ဈေးသည် 2ယောက် ထပ်တက်လာပြန်ရော။
စိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်နေတုန်း ဇက်ဆိုတာကြီး စမောင်းနှင်ပြီ။ ဇက်ကို ထိန်းတဲ့သူနှစ်ယောက်ပါတယ် ကြည့်လိုက်တော့ လူကြီးတစ်ယောက် ပဲ့ကိုင်တယ်၊ နောက်တစ်ယောက်က စက်မောင်းတဲ့သူ အသက် 10နှစ်ကျော်ကလေးနော်
လာတုန်းကလဲ သူတို့ပဲမောင်းတာ။ဘာလို့ သူတို့ပဲဆိုတာ တပ်အပ်ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ ကမ်းကိုအသွားအပြန် မောင်းပို့တဲ့ ဇက်က အဲ့တစ်စီးပဲရှိတယ်။ အသက်10နှစ်ကျော်ကလေးကို စက်နှိုးခိုင်းပြီး လှေပေါ်လိုက်ပါ အလုပ်လုပ်စေတာ မြင်ရတာ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ဝမ်းရေးအတွက် လုပပ်ကြရတော့လဲ မပြောသာဘူးလေ။
ဒီလိုနဲ့ စက်မောင်းပြီး ခဏအကြာမှာ ရေပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ လှေနဲ့ ရေပြင်ဟာ ထိလုနီးနီး တစ်ပြေးတည်းဖစ်နေပြီ မကွာဘူးဆို 2လက်မလောက်ပဲ ကျန်တော့တယ် နီးနေတာ။လန့်သွားတယ် တစ်စ်ခုခုဖြစ်တော့မလားဆိုပြီး စိတ်ထင့်နေတုန်းရှိသေး လှေဦးဘက်ကနေ “ရေတွေဝင်နေပြီ ရေတွေဝင်နေပြီ စက်ကိုပိတ်” လို့ကြားလိုက်ရတယ် ကြားကြားချင်း လူတွေယောက်ယက်ခက်ကုန်ပြီ အော်သူကအော် လှေနောက်ပိုင်းက ဈေးသည်တွေ လှေရဲ့ ဖင်ပိုင်းပေါ်တက်ပြီး သွေးပျက်နေချိန် လှည့်ကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါမှာ…..ကိုယ်တွေရဲ့လှေဟာ အလယ်ခေါင်ရောက်နေပြီ ကမ်းစပ်နဲ့ဝေးနေပြီဆိုတာ မြင်လိုက်ရတယ်။ အဲ့ချိန် စိတ်က ဘယ်လိုမှ ထိန်းမရတော့ဘူး အတော်ကြောက်နေပြီ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ကယ်ပါ 5စက္ကန့်လောက်ပဲရှိသေးတယ် လှေနဲ့အတူ ကိုယ်လဲ ရေထဲ နစ်ဆင်းသွားပြီ။ စိတ်ထဲမှာ” သွားပြီ ငါတော့ သေရတော့မယ်” ထင်လိုက်မိတယ် ။ အဲ့အချိန် ပါးစပ်ကနေ ဘာတွေအော်နေမိမှန်းတောင် မှတ်မိနိုင်တော့ဘူး အော်နေတယ်ဆိုတာထက် ညည်းနေမိတာတော့သေချာတယ်
ကိုယ့်ကျောနောက်မှာ မိုးကာသားနဲ့ လွယ်နေကျ လွယ်အိတ်လေးလွယ်ထားတယ်။သူကြောင့်ပဲ လှေနဲ့အတူ ရေထဲနစ်သွားချိန်မှာ ရုတ်တစ်ရက်ဘာမှမလုပ်နိုင်ချိန် ရေပေါ်မှာ ပေါ်စေခဲ့တဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစဖြစ်ခဲ့တယ်။သတိပြန်ဝင်လာချိန်မှာ ဘေးမှာကိုယ့်အဖွဲ့ကကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ရှိနေတာတွေ့ရတယ် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ အကိုတွေ 2ယောက်ရှိတယ်။ အဲ့အချိန်အထိ ဆောက်တည်ရာမရဘူး ငါနောက် 2မိနစ်လောက်နေရင် သေရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးဆိုးနဲ့ လန့်နေတဲ့အချိန် မျက်နှာချင်းဆိုင်က အကိုက “(နာမည်) နင်စိတ်ကိုထိန်း မကြောက်နဲ့ နင့်စိတ်ကို အရင်ငြိမ်အောင်ထား ဘာမှမဖြစ်ဘူး” လို့သတိပေးရှာတယ်။ တစ်ကယ်ပါ အဲ့အကိုရဲ့ကျေးဇူးနဲ့သတိဝင်လာပြီး ငါဒီမှာ တုန်လှုပ်နေလို့မဖြစ်ဘူး မဟုတ်ရင် ကိုယ့်စိတ်ကပြန်သတ်သွားမှာလို့အသိဝင်လာပြီး အဲ့တော့မှ ရေပေါ်ပေါ်နိုင်သမျှပေါ်အောင် ရေထဲမှာ ခြေထောက်ကခတ်နေရတယ်။ အဲ့ဒီအချိန် ကုန်းပေါ်မှာလို ကူမယ့်သူ ကယ်မယ့်သူ့ကို ထိုင်စောင့်နေလို့မရဘူး။ကိုယ်မှမရုန်းရင် အချိန်မရွေးသေနေ့စေ့သွားနိုင်တဲ့ အခြေနေဖြစ်လာတယ်။ဘေးမှာတစ်ဖက်တစ်ချက်က အစ်မနဲ့ ရေမကူးတတ်တဲ့ ကောင်လေးကို ကိုင်ထားတယ်။ အဲ့အချိန် ရုတ်တရက် ဆွဲချခံလိုက်ရသလိုမျိုး ရေထဲနစ်သွားတယ် ကိုယ်တစ်ဖက်က ကိုင်ထားတဲ့ ကောင်လေးလက်လဲလွတ်သွားတယ် သူလဲရေထဲနစ်ဝင်သွားတာ နှစ်ယောက်လုံး ခေါင်းပါ နစ်ပြီးရေအောက်ကျသွားတယ် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဘေးကကောင်လေးကို လက်လွတ်သွားပြီး ရေထဲမှာရုန်းနေတာမြင်လိုက်ရတော့ ချက်ချင်း မှီအောင်လှမ်းဆွဲပြီး သူ့ကိုအရင်ရေပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီးမှ ကိုယ်လဲ ခြေခတ်ကိုယ်ဖော့ပြီး ပြန်ပေါ်အောင်လုပ်နေတုန်းမှာ တစ်ဖက်က အစ်မကလဲ ဆွဲတင်လိုက်တာ သိလိုက်ရတယ်။ စိတ်ထဲမှာ သေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မလိုဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ အစ်မက လှေကိုကိုင်ထားလို့ပြောတာ ကြားလိုက်တယ် လှေပြန်ပေါ်လာပြီး ကိုယ့်မျက်စိအရှေ့မှာရှိနေတာတောင်မမြင်တော့ဘူး။ လှေကိုခဏကိုင်ပြီး ကိုယ့်လူတွေရေမကူးတတ်သူတွေကို သတိရပြီးလိုက်မေးမိတယ် အကုန်အဆင်ပြေနေတယ် ပြန်သိရမှ စိတ်အပူတစ်ခုတော့ကျသွားသေးတယ်။ ရေထဲမှာ ကြာချိန် 3မိနစ်လောက်ရှိနေပြီ… ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စွန့်လွတ်ရပြီတွေးနေတုန်း ငါးဖမ်းလှေတစ်စီး အနားကိုကပ်လာနေပြီ။ ခံစားချက်တွေ တွေးသာကြည့်တော့။ အနားကို ငါးဖမ်းလှေကပ်လာပြီ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရေထဲမှာရော ကူမယ့်လှေပေါ်တက်တဲ့အချိန် ရုန်းရင်းဆန်ခက်မဖြစ်ပဲ အန္တရာယ်ကင်းကင်း တက်လာနိုင်တာလဲ ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့လာရာလမ်းအတိုင်း ကမ်းဘက်ကိုပြန်တက်ခဲ့ကြတယ်။ လှေပေါ်ကဆင်းပြီး ကုန်းပေါ်ရောက်မှပဲ ငါမသေတော့ဘူး လို့စိတ်ဒုန်းဒုန်းချခြင်းနဲ့အတူ မျက်ရည်ပါစီးကျလာတော့တာပဲ။ ရေထဲမှာ စိတ်ကို တင်းထားရသမျှ ပင်ပန်းခဲ့ရသမျှ အခုမှ လွှတ်ချနိုင်တော့တာလေ။ကုန်းပေါ်မှာ ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ရမှာတွေမှာ ဝင်ပါဖို့နေနေသာသာ ကိုယ်တိုင်တောင်မနည်းစိတ်ကပ်အောင်နေနေရတဲ့အချိန် တစ်ဖက်ကလဲ ဆုံးရှုံးမှုအတွက် ဒီဖြစ်ရပ်အတွက် တာဝန်ယူဖို့တော့ ပြောနေကြတာကြားရတယ်။ ကံကောင်းတာကတော့ လူအသေအပျောက်မရှိဘူး ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရခဲ့ကြဘူး။ စက်မောင်းတဲ့ ကလေးလေးဆို သူ့အမေရင်ခွင်ထဲမှာ ငိုယိုပြီး တက်လုနီးနီးဖြစ်ပြီး ပါးစပ်ကလဲ “သားကြောက်တယ် သားကြောက်တယ်” ပဲ အော်နေတော့တာ ။ ကိုယ့်မှာ သူ့အတွက်စိတ်မကောင်းဘူး ကလေးနဲ့မမျှတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာရသွားမှာစိုးတယ်။ ခဏနေတော့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနဲ့ ရဲတပ်ကြပ်ဆိုသူက ပျောက်ဆုံးပျက်စီးစာရင်းကောက်ယူတယ်။ ထွေအုပ်ကိုစောင့်တယ်။ထွေအုပ်ရောက်လာတော့ ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲကအကိုတစ်ယောက်အပါအဝင် လူ5ယောက်လိုက်သွားကြတယ်။ကိုယ်တွေကိုတော့အသီးသီး နားနေရမယ့်ဆီကိုပြန်ပို့တော့ တည်းခဲ့တဲ့ ဘန်ဂလိုကိုပြန်ပြီး သတင်းစောင့်နေရတာပေါ့။
ခဏကြာတော့ နစ်တုန်းကအတူပါတဲ့ အခြားအဖွဲ့ကသူတစ်ယောက် လိုက်သွားတဲ့ 5ယောက်ထဲမှာထဲမှာ ပါတဲ့သူက နစ်နာသူတွေအတွက် ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူပေးဖို့လူတစ်ယောက်လာလိမ့်မယ်။ဆုံးရှုံးမှုအတွက်တောင်းခံမယ့်တန်ဖိုးကိုလဲ ညှိနှိုင်းဖို့ပြောတယ်။ တာဝန်ရှိသူဆိုတဲ့သူရောက်လာတော့ တောင်းပန်စကားမဆို စိတ်မကောင်းကြောင်းပြဖို့နေနေသာသာ မျက်နှာကိုချီထားပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစာရင်းကြည့်တယ်။ ညှိနှိုင်းနေရင်း အပြည့်မလျော်နိုင်ကြောင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏက ဘယ်လောက်ပဲရှိတယ် အဲ့လောက်ပဲ လျော်ပေးနိုင်မယ်ပြောတယ်။သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏဆိုတာ ပါလာတဲ့လူအရေအတွက်နဲ့ ဆိုင်ကယ် 4စီးစာနဲ့တွက်ရင် ဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်တဲ့ နည်းလွန်းတဲ့ ပမာဏတွေဖြစ်လာတယ်။ ညှိနှိုင်းနေရင်း နောက်ဆုံးပြောသွားတာက “မလျော်တော့ပဲ ခင်များတို့ဘက်က တရားစွဲလို့ရတယ်” “မလျော်နိုင်ဘူး လျော်မယ့်အစား ငါ့လူ2ယောက်ကိုပဲ ထောင်ထဲထည့်လိုက်ပြီး အာမခံနဲ့ နောက်မှ ပြန်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်” ဆိုပြီး လူမိုက်စကားပြောပြီးထွက်သွားတယ်။ ဒါဖြစ်သင့်တဲ့ပုံစံလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာမလိုပဲ သိနိုင်တယ်။ သူတို့ဘက်က တာဝန်ယူလုိစိတ်မရှိပဲ လူ့အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားတာတောင် တာဝန်မဲ့တဲ့စကားပဲထွက်လာတာ အတော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်နေရမယ့်အနေအထားမဟုတ်တဲ့ ပုံစံတွေ့လိုက်ရတော့ စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာတာပဲ။
ဒီလိုနဲ့ ညနေကျ မပြန်ခင် ငပုတောရဲစခန်းကုိ လာခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်။အထုတ်ပိုးတွေသိမ်းပြီး ရဲစခန်းဆီသွားဖို့ အိမ်ပြန်ဖို့လမ်းခရီးအတွက် ဇက်ဆိပ်ကိုပြန်လာရပြန်တယ်။ ဇက်ပေါ်တက်မယ် ကြည့်လိုက်တော့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ လူ 8ယောက်လောက်ရောက်နှင့်နေပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီး အဖွဲ့သား5ယောက်ခွဲပြီးကျန်နေခဲ့တယ်။ ကျန်နေခဲ့တဲ့သူတွေ နောက်တစ်ခေါက်လိုက်လာတော့ ပိုတောင်ဆိုးနေတယ် ဆိုင်ကယ်က နှစ်စီးနဲ့ လူကလဲ 10ယောက်ကျော်ပါလာတယ်။ ဝန်ပိုလို့လှေတိမ်းမှောက်ထားတာကဖြင့် တနေ့မကူးသေးဘူး လုံးဝဆင်ခြင်သွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရတော့ အတော် မိုက်ရိုင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေ လူ့အသက်တွေကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို စိတ်ပျက်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။
ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိသလဲ? ကုမ္ပဏီကလဲ တာဝန်ယူမှုမရှိဘူးဆိုတော့ နောက်လူတွေအတွက်ဘယ်မှာလဲ လုံခြုံမှုတွေ? ကိုယ့်အသက်နဲ့လဲပြီး ဒီနေရာကိုသွားရဖို့တော့ တန်ရဲ့လား? မေးစရာမေးခွန်းတွေဖြစ်လာပြီ…. အဖြေကတော့ ရှာမတွေ့ခဲ့ အသက်သက်ဘေးနဲ့ကြုံပြီး သာဓကရှိတာတောင် မပြောင်းလဲသွားဘူးဆိုတော့ နောက်ထပ် ဘယ်လိုသတင်းတွေများထပ်တက်လာဦးမလဲ? ကိုယ်တွေလိုအဖြစ်တွေဘယ်လောက်ရှိလာဦးမလဲလို့ ရင်တမမနဲ့စောင့်နေရဦးမှာလား?ရဲစခန်းရောက်တော့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို သက်သေအဖြစ်ယူပြီး ဓာတ်ပုံရိုက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အပြည့်အစုံမေးသွားတာကလွဲရင် ဒီနေ့အထိတော့ ဘာသတင်းမှ မကြားရသေးပါဘူး။နစ်နာသူတွေ ကာယကံရှင်ကသာ ဒုက္ခတွေပိုက်ပြီး ရဲစခန်းထိရောက်လာပေးပေမယ့် လောဘစိတ်တစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဇက်ကို ပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီက တာဝန်ရှိသူဆိုတာ ရောက်မလာပဲ လက်လွတ်စပယ် လုပ်သွားခဲ့တယ်။ဘာမှထွေထူး ကျေနပ်လောက်အောင်မဖြစ်ခဲ့ပဲ ရဲစခန်းကထွက် အိမ်ပြန်လမ်းကို စိတ်ထဲမှာ အခဲမကျေစွာ နဲ့ တစ်ကားလုံးလဲ ငြိမ်သက်ပြီး အိမ်ပြန်လမ်းကတော့ လမ်းခရီးထက်ပိုကြမ်းခဲ့ရတော့တာပါပဲ။
ဒီဖြစ်ရပ်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့- tour agencyဘက်က စီစဉ်မှုအားနည်းခဲ့တယ်-ဇက်ဆိုတာရဲ့ ခိုင်ခံ့မှုအားနဲ့ ဝန်အားတွေ မမျှတတာတွေ့ခဲ့ရတယ်-လှေပေါ်မှာ ကလေးလုပ်သားအသက်10နှစ်ကျော်လောက်ကို ခိုင်းစေထားတာတွေ့ရတယ်။-ဇက်ကို အခကြေးငွေယူပြီး ပြေးဆွဲတာကို ဒေသခံတွေက လုပ်တာမဟုတ်ပဲ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက လေလံအောင်ထားတာလို့ ဒေသခံတွေပြောပြချက်အရသိရတယ်။-ကုမ္ပဏီပိုင်ဖြစ်လျက်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးကိုကြည့်ပဲ အသက်တန်ဖိုးကို လုံးဝမငဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေတွေ့ရတယ်-ဇက်က နှစ်စီးရှိတယ် တစ်စီးကိုပဲ ထုတ်သုံးပြီး ကျန်တစ်စီးကို ကမ်းမှာ မသုံးပဲထားတာဖြစ်တယ်။-ဆီဖိုးသက်သာအောင် နှစ်ကြောင်းနေရာမှာ တစ်ကြောင်းထဲနဲ့တင်ပြီး ဝန်ပိုတွေဖြစ်လဲ သိရက်နဲ့ မျက်ကွယ်ပြုထားတယ်။-ဇက်ပေါ်မှာ အသက်ကယ်အင်္ကျီ၊အသက်ကယ်ဘောတွေတစ်ခုမှမထားရှိပဲ ငါးဖမ်းရာမှာသုံးတဲ့ ဘောလုံးတွေကိုတိုင်တစ်ခုမှာ ဖြုတ်ရအဆင်သင့်မလွယ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့သာ ပါရှိတယ်။-ငါးဖမ်းလှေလာကယ်တယ်ဆိုတာ ပုံမှန်ရှိနေတတ်တဲ့ ငါးဖမ်းလှေမဟုတ်ပဲ ကံကောင်းချင်တော့ ငါးဖမ်းထွက်ဖို့ ထွက်လာတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံလို့သာ ကယ်ပေးနိုင်လိုက်တာ မသေလို့သာ အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် သေမင်းနှုတ်ခမ်းဝကို နင်းပြီး ပြန်တက်လာခဲ့ရတဲ့သူတွေကို တောင်းပန်ခြင်း စိတ်မကောင်းကြောင်းဖော်ခြင်း၊နောက်မဖြစ်စေဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်း အပြုအမူတွေနဲ့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုတွေဝေးစွ မထီမဲ့မြင်ဆက်ဆံခံခဲ့ရတာတွေတွေးရင်း ဒီစာရေးတဲ့အချိန်မှာတောင် ရင်တွေတုန် ၊လက်တွေတုန်ပြီး တကယ်ပြန်ဖြစ်နေသလို အခါခါ ခံစားရတဲ့စိတ်တွေရောထွေးနေခဲ့တယ်။ နောက်လူတွေလဲ သတိပြုဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင်အသက်နဲ့ရင်း သင်ခန်းစာချပြလိုက်ရပါတယ်။
Credit-မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားစွာ ခရက်ဒစ်ပေးပါသည်။
သေသွားတဲ့ချစ်သူကို ယနေ့အချိန်ထိ ချစ်ခင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း နေ့စဉ်ပို့စ်တင်လေရှိတဲ့ အမျိုးသမီး
ကျွန်မနစ်နာကြေးလည်း မလိုချင်ဘူး နောက်လူနာတွေကို ကျွန်မလိုမျိုး ဆက်မလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်
တစ်ယောက်စီတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် လေယာဉ် တစ်စင်းစီ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်ရှေ့တိုင်းမှာ လေယာဉ်ပါကင်ထိုးထားလေ့ရှိတဲ့ ကမ္ဘာကျော်နေရာ
ပန်းသီးတစ်စိတ်ကြောင့် တစ်သက်စာ ဒုက္ခိတဖြစ်သွားရှာတဲ့ ကလေးငယ်လေး
သူ့ကို နောက်ပြောင်တဲ့ ဗီဒီယိုတွေ အွန်လိုင်းပေါ်မတင်ဖို့ ငိုယိုပြီး တောင်းပန်လိုက်တဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ
အသက်အရွယ်နှင့်မမျှအောင် တရားပြခဲ့တဲ့ ဆရာလေး
ဟင်္သာတပြည်သူ့ဆေးရုံကို အရေးပေါ်လူအနာအဖြစ်ရောက်လာတဲ့ ၂ နှစ်သမီးလေးရဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာအဖြစ်
ဖျားချင်သည့်အချိန် ဖျားနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ဒေါ်လာ ၈၀ တန် တစ်သျူးစက္ကူ